Musangano weKuzeya Zimbabwe Unopera muWashington neChishanu
Zimbabwe iri kunetsekana zvikuru kuwana rubatsiro kubva kune nyika dzakabudirira kuitira kuti ikwanise kuwedzera mari dzemihoro yevashandi vehurumende pamwe nekufambiswa kwezvirongwa zvebudiriro.
Mashoko aya ataurwa nemakurukota maviri emuZimbabwe muzuva rekupedzisira remusangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Vachitaura pamusangano uyu vari muHarare, vachishandisa hunyanzvi hwe skype, gurukota rezvedzidzo, VaDavid Coltart, vati vari kuedza napose pavanogona napo kuitira kuti vawane rubatsiro rwekugadzirisa nyaya dzemari dzemihoro yevadzidzisi kuitira kuti varambe vari muzvikoro. VaColtart vati pari zvino vari kutambira mari shoma shoma – inoita zana nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica pamwedzi.
VaColtart vati mari inowanikwa nehurumende inosvika zvikamu makumi manomwe kubva muzana, iri kushandiswa mukubhadhara vashandi vehurumende, izvo zviri kupa kuti hurumende isare isina mari inoikwanira.
VaColtart vati kunyange hazvo rubatsiro rwemari yemibhadharo iri kunetsa kuwana muhurumende, nyika yawana mari kuUNICEF, iyo ichashandiswa mukudhindwa kwemabhuku anoshandiswa muzvikoro.
VaColtart vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvibatsire mukuunganidza mari, mabhuku nezvimwe zvakadaro zvekushandisa muZimbabwe. Vakurudzirawo vadzidzisi nevamwe vakabuda munyika kuti vadzoke kunobatsira kumutsiridza nyaya yedzidzo munyika.
Vachitaurawo vari muWashington, gurukota rezvekupodzwa kwemoranda pamwe nekugarisana zvakanaka, Amai Sekai Holland, vati Zimbabwe inofanirwa kubatana kuitira kuti zvinhu zvifambire mberi.
Vatiwo sangano reUnited Nations Development Program rakavimbisa kupa Zimbabwe mari yakawanda zvikuru iyo ichashandiswa muchirongwa chekupodza maronda pamwe nekugarisana kwakanaka. Amai Holland, avo vakarohwa zvakaipisisa muna 2007 vari mumaoko emapurisa, vanoti bazi ravo riri kuwana rubatsiro zvikuru pasi rose zvekuti kupera kwaKubvumbi, Ama Mary Robinson, mudzimai wekutanga kuita mutungamiriri we Ireland, vachashanyira Zimbabwe kunobatsira chirongwa chekupodza mavanga nekuregererana.
Mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMcdonald Lewanika, vanotiwo kunyange hazvo zvimwe zvinhu munyika zvashunduka, pachine basa guru rinoda kuitwa kuitira kuti nyika ive nehutongi hwakanaka.
Vapinda musangano uyu vari kubvumirana kuti pachine basa guru rinoda kuitwa mukugadzirisa zvinhu munyika. Vanhu ava vari kubvumiranawo kuti Zimbabwe inofanirwa kubatsirwa nemari kuitira kuti zvinhu zvifambire mberi.
Musangano uyu wakarongwa neAfrica Action, paine chinangwa chekutsvaga nzira dzekubatsira Zimbabwe, kuitira kuti ibude mumatope aari.
Zvinhu zvakanga zvamira zvisina kunaka muZimbabwe apo hurumende yaimbove yeZanu PF chete yakanga yosemwa nedzimwe nyika nepamusoro pekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekusaremekedza mitemo nemitongo yematare.
Zvinhu zvakazotanga kuratidzika zviri nani zvichitevera kuumbwa kwehurumende yemushandira pamwe pakati pemapato maviri eMDC neZanu PF.